HAFATRA 1 MAY 2020 - FIRAISAN'NY SENDIKAN'NY MPIASA ETO MADAGASIKARA
ANTSO AVO HO AN’NY FILOHAN’NY REPOBLIKA SY NY PRAIMINISTRA
Noho ny fepetra napetraky Fitondram-panjakana manoloana ny valan’aretina COVID-19, dia tsy azo atao ny mivorivory sy manao hetsika an-dalam-be ahafahan’ny mpiasa manamarika 1° MAY amin’ity taona 2020 ity. Saiky maneran-tany moa, dia itovizana ny fomba anamarihana ny 1° MAY – FETIN’NY ASA. Koa amin’ny alalan’izao fanambarana izao no ampitainay FI.SE.MA. hafatra ho an’ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka sy ny Filohan’ny Repoblika ary ny Praiministra:
Miarahaba ny mpiasa Malagasy nahatratra ity andro lehibe – 1 MAY – ity no voalohan-teny, ary mankahery azy ireo hatrany amin’ny asa atrehany an-davanandro;
Na dia an-taonany maro aza no nikatsahana izany fiovana lalim-paka eo amin’ny tontolon’ny Asa izany ho fanajana ny Zo maha-olona, ny Zo maha-mpiasa, ny hananana Asa Mendrika , dia iaraha-mahita sy iaraha-mahalala fa ny mifanohitra amin’izany no iainana isan’andro eny amin’ny toeram-piasana maro eto Madagasikara: Fanaovana tsinontsinona ny maha-mpiasa, tsy fanajana ny zo sendikaly indrindra ny Fenitra sy ny Zo fototra eo amin’ny Asa, fanararaotana amin’ny endriny maro samihafa, fampiasana zaza tsy ampy taona, tebiteby sy fanahiana isan’andro vaky izao. Mandry an-driran’antsy lava izao ny ankamaroan’ny mpiasa, tsizarizary ny fiainam-pianakaviana ary mametra-panontaniana ny mpiasa maro fa toa tsy misy antony intsony ny fiainana fa tapitra hanompoana sy itadiavana an-dRavola.
Na dia dradraina aza fa mpiara-miombon-antoka eo amin’ny tontolon’ny Asa ny mpiasa sy ny Sendikany, ny zava-misy dia fihatsaram-belatsihy no tena iainana eny amin’ny toeram-piasana: betsaka ny orinasa no mbola tsy mamela sy manaiky ny sendika hiorina sy hiasa malalaka ara-dalana, maro ny fanenjehana, ny ramatahora sy sotasota maro zakain’ny sendikalista, eny hatramin’ny fandroahana mihitsy aza. Manamafy izany ny tsy fisian’ny Komitin’ny Orinasa sy ny Solontenan’ny Mpiasa amin’ny orinasa maro manerana ny Nosy, sy ny tsy fandraisana ny Solontenan’ny Mpiasa isam-bolana voalazan’ny Lalana ho fampiroboroboana ny Dinika Sosialy.
Vao mainka mibaribary izany fihatsaram-belatsihy izany amin’izao fitrangan’ny valan’aretina COVID 19 izao. Maro ny orinasa ny manararaotra ny fisian’ny valan’aretina handroahana mpiasa sy hanaovana chômage technique. Manamafy izany ny taratasy misokatra nalefan’ny Syndicat Autonome des Inspecteurs du Travail tany amin’ny Filoham-pirenena. Tsy voahaja araka ny tokony ho izy mihitsy ireo fepetra iarovana ny fahaverezan’asa, voalazan’ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny 23 Marsa 2020.
Koa manoloana izao zava-misy ankehitriny izao, izahay FI.SE.MA. dia
Mitodika manokana sy manao antso avo amin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Praiminisitra izahay FI.SE.MA. , mba hijeren’izy ireo akaiky ny mpiasan’ny sehatra tsy miankina amin’ny fiahiana ara-tsosialy azy ireo, indrindra ireo tratran’ny chômage technique sy ireo voaroaka mivantana na an-kolaka noho ny valan’aretina, ary hampanaja ny Fenitra sy ny Zo fototra eo amin’ny Asa – Principes et Droits Fondamentaux au Travail.
Manantitra fa mitondra ary mbola hitondra anjara biriky betsaka amin’ny kitapom-bolam-panjakana ireo mpiasa amin’ny sehatra tsy miankina ireo ka mba tokony hisitraka ny fanampiana tandrify azy ireo.
Antananarivo faha-30 APRILY 2020
Jean Gualbert RAVONJISON JOSE RANDRIANASOLO